Fanafoanana ny aretina poliomelita : manamafy fahalalana ny teknisianin’ny laboratoara | NewsMada
Fanafoanana ny aretina poliomelita : manamafy fahalalana ny teknisianin’ny laboratoara
80% ka hatramin’ny 90% ny tahan’ny fanaovam-baksiny iarovana amin’ny aretina poliomelita andiany fahafolo, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Andriamarivo Lalatiana, omaly, teny Ankorondrano.
Mbola misy 10 ka hatramin’ny 20%, tsy tratra mila anaovana ezaka manokana amin’ny andiany manaraka sy entanina ho famongorana ny aretina poliomelita eto Madagasikara. Efa miroso amin’ny famongorana ny aretina poliomelita isika Malagasy, satria efa tapaka ny fivezivezen’ny otrikaretina avy amin’ny fitiliana ny rano maloto amin’ny toerana telo : Antananarivo, Mahajanga sy Toliara. Mandray ny fitiliana ny rano maloto atao indroa isam-bolana ny Institut pasteur de Madagascar ary mamoaka ny valiny. 12 ny toerana handraisana ny rano maloto hotilina eto Antananarivo, telo any Toliara ary valo any Mahajanga, hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny IPM, Razafindratsimandresy Richter. Ankoatra ny fanaraha-maso ny rano maloto, mandray ny fitiliana ny tain’ny ankizy avy amin’ny distrika ahina ho tratran’ny aretina poliomelita koa ny teknisianin eny amin’ny IPM.14 andro aty aoriana mivoaka ny vokatry ny fitiliana.
Manana anjara toerana lehibe amin’ny fanaraha-maso ny aretina poliomelita ny laboratoara misahana ny fitiliana, ka mila havaozina isan-taona ny fenitra sy ny teknika ampiasaina hitovy tantana. « Amin’ity taona ity, noho ny fahatsapana ny ezaka lehibe vitan’i Madagasikara momba ny ady amin’ny poliomelita, mandray ny fivorian’ny teknisianin’ny laboratoara avy amin’ny firenena 16 Antananarivo nanomboka omaly », hoy ny solontenan’ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana, OMS, Charlotte Ndiaye. Haharitra hadimina ny atrikasa eny Ankorondrano handraisan’ny teknisianina amin’ny firenena vahiny traikefa satria nahomby ny asa teto. Isan-taona mikarakara atrikasa tahaka izao ny OMS.